Daafinta Oracle Dashboard - Iskuulka ITS Tech
Daafinta Oracle Dashboard
Waa maxay Dashboardka Oracle?
Waa maxay dashboardka:
Natiijooyinka imtixaannada kala duwan
Helitaanka wax ka qabashada boodhka Oracle
Yaa mas'uul ka ah sameynta iyo isbeddelka dashboardka?
Waxyaabaha lagu dari karo bogga dashboard
Maxaa kantaroolaya muuqaalka Oracle Dashboard?
Dashboardka Oracle waa a barta xogta ganacsiga, iyo dhiirigelinta ka dambeysa sirta ganacsiga sirta ganacsiga waa inay muujiso ururada Tilmaamaha Daraasada Muhiimka ah (KPIs) iyo xaaladda hadda taagan ee cabbiraadda. Sida caadiga ah, dashboards ayaa tirtira tirooyinka tirooyinka, cabirida, iyo natiijooyinka fulinta ee shaashadda.
Dashboard wuxuu leeyahay ugu yaraan hal bog, iyo bogaguba waxay muujin karaan wax kasta oo aad furi kartid ama aad heli kartid barnaamijkaaga internetka. Bogag ayaa laga yaabaa inay muujiyaan:
Cawaaqibta baaritaanka halkan waxay ku dheehan tahay wax soo saarka ay soo dirtay server-ka Sirdoonka Ganacsi ee Oracle ee ku habboon shuruudaha imtixaanka. Xididaadda waxaa laga yaabaa in loo arko aragtiyo isbeddel ah, tusaale ahaan, garaafka, dhajiska, iyo miiska. Macaamiishu waxay markaa burburin karaan oo eegaan natiijooyinka, ka dhig sida PDF, daabacaan sida HTML ama PDF, ama waxay ka jawaabaan natiijooyinka xisaabinta.
Digniinaha ka yimaada wadayaasha
Isku xirnaanta hawlaha iyo miiska wada xidhiidhka
Xeeladaha baqshiinka ku jira gudaha liiska hubinta ee Oracle BI
Warbixinnada qaaska ah ee Oracle BI
Qodobbada lagu dhejiyey sida warbixinnada ama bogagga bogagga
Qorshaha baqshadaha ee taxanaha bandhigga
Marka aad fureyso dashboard, walaxda waxay ku tuseysaa mid ama bogag. Waxaad kala saari kartaa boggaga dashboardka adiga oo ka jaraya qaybta sare ee qaybta dashboardka. Xagga sare ee dashboardka, waxaad arki doontaa bar qalab oo kugu xoojinaya:
Ka beddel dashboard waxay ku siisay faa'iidooyinka iyo oggolaanshaha loo baahan yahay
Muuji kala-doorashooyinka kala duwan ee la shaqeeya bogga dashboardka; sawir muujinaysa in la daabaco bogga xaadirka ah.
Si aad u samayso shaashad, waa in qofku lahaadaa macaashka Dashboard, iyo kormeeruhu wuxuu wax ka qabtaa faa'iidada.
Kaliya kuwa leh faa'iidada iyo raali gelinta dashboardka, iyo walxaha lagu dari karo, waxay sameyn karaan isbedelka dashboard. Wixii intaa ka badan, isbeddelka dashboard waxaa lagu sameeyaa bogga dashboard.
Soo saaraha dashad ayaa kuu oggolaanaya inaad ku darto boggaga dashboard iyo bedelida bogagga. Waxaad sidoo kale xakamayn kartaa qaabka bogagga oo ku dari kartaa maqaallada dashboardka.
Bogagga waxay leeyihiin meelaha iyo qaybaha qabta walxaha dashboardka. Dashboard kasta wuxuu leeyahay wax aan ka yareyn hal bog.
Tabs-ka ka sareeya caawinaadda ugu sareysa ee dashboardka si loo aqoonsado bogaga dashboard. Bogagyo kala duwan ayaa ka caawiya diyaarinta waxyaabaha. Tusaale ahaan, waxaad yeelan kartaa hal bog si aad uga soo saartid natiijooyinka imtixaannada maalin kasta, bog kale oo la xidhiidha goobaha bixiyeyaashaada iyo bog kale oo la shaqeeya intranet shirkad.
Walxaha dashboardka - Kuwani waa waxyaabaha shaqada gaarka ah ee a dashboard. Xaaladaha maqaallada dashboardka ayaa ka mid ah hawlaha lagu biiro, qaybaha hareeraysan, iyo walxaha la geliyay waxay muujiyeen meel bannaan oo ku yaal gudaha dusha.
Qoraalo walxo - Ma jiraan waxyaabo aad adiga ama macaamil kale aad udheeraatay kaydka sirta ganacsiga ee Oracle ee lagaa rabo inaad u baahan tahay. Tilmaamayaashu waa ballanqaadyo, imtixaanno iyo taasi waa bilowgii hore.
Joogitaanka dashboard, tusaale ahaan, cabirka moodada iyo shaleelka aasaasiga ah waxaa xakameynaya:
Maro - Waxay kantaroolaan bandhigga dashooyinka Oracle, tusaale ahaan, calaamadaha shirkadaha, rukummada asaasiga ah, iyo qaababka muuqaalka. Marka ay macaamiishu saxiixaan, maqaarku wuxuu ku jiri karaa laba qaybood oo kala-bax ah. Maamulayaashu waxay samayn karaan maqaarka cusub ama waxay bedeli karaan kuwa aan caadiga ahayn.
Noocyada - Waa hagaag, qaababka ayaa xakamaynaya qaabka natiijooyinka natiijada. Noocyada noocan oo kale ah waxay ku xiran tahay hooskii xiriirka iyo qoraallada, cabbirka iyo qaabka qoraalka ee maaddooyinka, sifooyinka iyo sawirada garaafyada, meelaha bannaanka ka ah jadwalka, iyo taasi oo ah bilowgii hore.
Noocyada waxay yimaadaan qabanqaabiyeyaasha ka kooban waraaqaha qaabaysan ee cascading (diiwaanka ay ku jiraan fidinta .css), qaababka garaafyada iyo sawirrada. Maamulayaashu waxay samayn karaan qaababka cusub ee qaabka iyo beddeli karaan kuwa kale.
Macaamiishu waxay ka saari karaan qaybaha qaarkood ee xaashiyadaha qaabka ay ku jiraan cabbirka cabbirka iyo miiska miiska marka ay soo baxayaan. Waxay isticmaali karaan tabaha natiijooyinka si ay u dhammaystiraan.
Habaynta qurxinta - qaabaynta qurxinta waa wax saameynaya muujinta muuqaalka dashboards iyo natiijooyinka. Waxaad u codsan kartaa qaybaha, qeybaha iyo natiijooyinka. Ku qorida warbixinnada boggaga dashboard
Intii aad isticmaaleysey khariidadaha Oracle, waxaad ku dari kartaa ugu yaraan hal warar ku saabsan bogga dashboard. Waxay ka dhigtaa iyada oo ahmiyad weyn u leh inaad u gudbin karto warbixinnadaada macaamiisha kale oo ka faa'iideysta wadayaasha si ay u qorsheeyaan boggaga dashboardka.
Dhakhtar takhasus leh ayaa u diri doona dhamaan dukumintiga macmiilka, iyo mid kasta oo ka mid ah boggaga macluumaadka ee ku qoran warbixinta.
Markaad naqshadayso khabiir takhasus leh oo ku saabsan bogga dashboard oo ku jira warbixinta sirta ganacsiga ee sirta ah, xasuuso shuruudaha la socda:
Qorshaha warbixinta ee daabacaadda BI waa inuu ahaadaa qaabka PDF
Khabiirka takhasuska leh waa in la sameeyaa si loogu gudbiyo qaabka PDF
Intii lagu daray jawaabta bogga dashboardka, waxaad samayn kartaa sida xiriirka ama walaxda la geliyay. Waxaa loo soo bandhigay warbixinta si toos ah u muujisay bogga dashboardka.
10 Koorsooyinka Tababarka Tababarka Oracle Ku-saleysan Iyo Shahaadada waxay ku siin karaan Kobacaaga Shaqadaada
Sida loo Helo Shahaadada Solaris - 1z0821 & 1z0876